Malawi oo doonyo dheereeya kaga hortegaysa soomaali si xad-dhaaf ah tahriib ugu gala dalkaas – Radio Daljir
Diseembar 1, 2013 2:43 b 0
Lilongwe, December 1, 2013 – Dowladda Malawi ayaa mar kale ku celisay in ay la dirirayso dadka Soomaalida ah ee sida xad dhaafka ah ku gelaya dalkaas, iyagoo ka gudbaya xuduudaha dalku la wadaago Jamhuuriyada Tanzania.
Wargayska The Telegraph ayaa mar kale war-bixin ka qoray madaxweynaha dalka Malawi oo ay su?aalo ka weydiiyeen habka ay kula dagaalamayaan tahriibta dadka Soomaalida ah.
Madaxweynaha Malawi haweenayda la yiraahdo Joyce Hilda Banda, waxay u sheegtay Telegraph in ay iibsadeen doonyo dheereeya oo ilaalin doono webi ku yaala xuduuda Malawi iyo Tanzania, kaas oo ah meesha ugu daran ee ay Soomaalidu ka soo gudbaan.
?khatar badan baa ka dhalan karta Soomaalida qaatay baasaboorkeena, kadibna u dhaafay Britian iyo USA, taas waa khatar wayn.? Ayey tiri haweenayda la yiraahdo Joyce Banda madaxweynaha Malawi
Marwo Banda, waxay xustay talaabada ay ka qaadayaan tahriibayaasha Soomaalida ah in ay sidoo kale caawinayso isla tahriibayaasha oo dhibaato badan kala kulma xiliga ay webiga ka gudbayaan, inta badan Soomaali ayaa ku dhimata webiga sida ay sheegtay haweenaydu.
Tahriibayaasha Soomaalida sidoo kale waxay iyagoo lugaynaya ay ka soo degaan buuraha u dhexeeya labbada wadan, sida ay sheegtay madaxtooyada Malawi.
Tanzania iyo Malawi ayaa ah meelaha ugu daran ee dadka Soomaalida ay maraan xiliyada ay u socdaan dalalka koonfur Afrika iyo Mozambique oo ay si tahriib ah ku galaan.